Kedu kaịna-esi enweta ego site naụdagị？ Ezigbo mma?
Ọfọn，gịnịmaọbụrụna i n’n ike ime ya nantụrụndụnkeụlọgị？ Enweghịobiọbụlaijikọọrọ，ọdịghịoge ga ga-agbaso，ọdịghịkwaogeọrụọrụ.
Makaọtụtụndịmmadụ，nkeahụbụụrụdịkaỊTuberyiri kaọgụnyere。 Naanịnọdụalan’ihu igwefoto ma mee vidiyo banyere iri nri，na-eme nkuzi etemeete，maọbụna-egwu egwuregwu vidiyo maịga-eme ka ego site na nlele niileịnwetara.
Nke abụiheịbụỊTuberanaghịadịmfedịkaịdị，maọbụrụnaịna-eche banyereịbanyen’ụwanke YouTubing，e nwere nnukwuajụjụabụọga-achọịma：
我kwesiri ime ya?
N’iburu nkeahụn’uche，kaịbanye n’imeọrụnkegịna YouTuber machọpụtamaịbụonyena-emepụtaọdịnayana YouTubekwesịrịya.
1 自我Ole Ka NdiNlekọtaYouTube kacha elu?
2 Kedu kaỊga-esi mee ego ha?
2.1 1-Wuru na YouTube营利/
2.2 Kedu ka e siagbakọtaọnụegomgbasa ozi?
2.3 自我2-Banyere YouTube
2.4 Ngwaahịa/ Nkwado
3 Ịghọonye ga ga-eme
3.1 Nke aọbụmakagị?
3.2 Iji YouTubedịka NkumeNzọụkwụ
3.3 ỊbụgịTTuberbụihe gbasara obiụtọ
自我Ole Ka NdiNlekọtaYouTube kacha elu?
Tupuanyịagbada na ntinye ntinye nke egoịna-eme kaỊTuber，kaanyịleleeụfọdụn’ime ihekachasịTubersmachọpụtaihe ha merekpọmkwem.
一个新媒体摇滚明星网站，一个新的摇滚明星网站，一个YouTube网站，一个新的摇滚明星网站，一个新的摇滚明星网站，一个新的摇滚明星网站。 OtudịYouTube YouTuberbụPewDiePie（Felix Kjellberg），onye nyere iwu banyere 500 ndendịdebanyere aha naọwaya na nkezi 1.5 nde echiche kwa vidio.
YouTube，PewDiePie na-enweta ihekarịrị$ 12 nde kwaafọ网站，您可以在Yale上找到自己的网站。 Ro Ro Ro Ro Ro Ro Rooth Teeth Corporation，na-enweta $ 13,000,000 kwaafọ，ebeobereọwadịkaNigahiga na Epic Meal Meal Time na-enweta kwa af $ 2.9 na $ 3.1 nde.
PewDiePie kwudoro na nso a-ihefọrọnke nta kaọbụrụnde 3 naụbọchị2 mgbeahapụcharavidiyo a（hụyadịndụ）.
N’ozuzu，bọrụnaịbụonyemmepụtaihe na-agbanwe agbanwe na YouTube，ịime ez ezigbondụna ikpo okwu网站na vidiyogị.
Kedu kaỊga-esi mee ego ha?
在YouTube上分享您的照片，以及在其他网站上看到的所有照片。 N’ụzọbụisi，和我们在YouTube ma habụ：
Ndịna-akwado ya na egondịọzọ
Ọbụrụnaịnwenkụdammụọna iji YouTubedịka ikpo okwugị，ịga-ahụrịrịhụnaụnwereakaụntụYouTube nke edoziri iji mee ego.
1-Wuru na YouTube营利/
Ka any site kwuo na inweworọwae guzobere ma bulie vidiyo ole na ole，ịịozugboịmaliteịmalitena YouTube网站naịgbanwuoya。 mee ka获利makaakaụntụgịna banban maka Google Adsense.
Iji mee ka YouTube营利网站：Nbanye> Ọwa> ỌnọdụnaAkụkụ> 营利（maọbụ，pịaebe a）.
intịgharịego naakaụntụgịna-enyegịohere inweta ego sitenọdịnayambụgịsite na mgbasa ozi na-etinye na vidiyogịmgbe a na-ele ya anya。 Google的Google Adsense网站已添加至Google的最低帐户，而Google的Google网站则是YouTube的YouTube中心。.
N’ikpeazụ，ga ga-etinyeakwụkwọmaka aNgwakọtammemme YouTube mmemme nke ga-enye g uru ole ole na ole ole naakaụntụgị，dịkangwáụrụnyocha，ngwágerke nkazi bul di di di di di di di di di di di di 。 IjighọọOnyeMmekọYouTube，gaach-chịnweta10,000 echiche eha na eze naịwagị（yabụ，1,000 vidiyo na vidiyo 10）magụọyana YouTube kaịbụrụOnyeMmekọrịtaYouTube mara mma.
Ozugbo i nwetachara ihe niileahụ，anyịike banyen’ikpeazụna oleịga-enweta site na YouTube.
Mgbasa ozibụkpụkpụazụnke YouTuber guzobere na nke a，ịna-ahụha。 Nchịkọtamgbasa ozi na mmalite nke vidiyo maọbụmgbasa ozi gbasaa na ala nke vidiyobụotúọbụlaYouTuber si eme ka ego si na vidiyo ha.
Ozugboịmaliteịkọwavidiyogị，nikeeịhọrọotúịchọrọka mgbasa oziga-apụtana vidiyogịn​​a ego ole ga ga-enweta ga-adaberen’otúndịna-egegịntta simet。 YouTube YouTube，，cha cha cha cha cha cha cha YouTube，wa wa wa YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube.
Kedu ka e siagbakọtaọnụegomgbasa ozi?
IhendekọYouTubena-atụle（mgbe onye na-elelepịamaọbụlelee mgbasa ozigị）yana maka ihebọla1,000，ga-enweta ihedịka$ 7.50。 Nsogbubụotúe sigụọechicheahụ，ebeọbụnaọdabere na otundịna egegịntị。 on bonrụna onye na-ele anya kpebieịkwasa网站na mgbasa ozi maọbụjiri ad-blocker，ịghghịakwụụgwọmaka echicheahụ。 N’ihi nke a，echichedịeluapụtaghịnaọbụvidiyo na-enweta ezigbo ego。 Vidio nke nwere echiche 10,000 nwere ike inwe 3,000 puku puku，nkena-asụgharịnaanị$ 22.50.
Iji buli urugịna vidiyo na mgbasa ozi，ga-achọịmanke mgbasa ozikachasịmma nkeọdịnaya。 3bụrụnaọbụobere vidiyo nke 3，mgbasa ozi gbasaa nwere ikedd mmakarịanchịkọtankeabụọ30. N’iji mmemme OnyeMmekọYouTube，ịkwesịrịinwe ohereịnwetachịkọtaọ ị.
N’agbanyeghịnaọkachasịmfeịmepụta，inweta ego na na YouTubeadịghịezughịezu n’onwe ya，nke mererstụtụn’ime YouTubersna-achọtaụzọndịzzọga-esi enweta ego.
Kaọna-anọugbu a，YouTube上的na-esiri ike kar n’ihi nke a，ỊbọghịnanaỊahụkarịịhụỊTuberịgabigaYouTube iji nweta ego ha。 N’ogeahụ，ụzọatọdịukwuubụ：nkwado nangwaahịa，ịzụahịanke onwe ha，naịbaụba.
YouTube使用者敬请原谅，乔纳·詹娜（Jeanna）弹珠乐队（dabere nanjikọtanke）抢先看。 NdịabụmgbeọtụtụụzọHowTubers si enwetaụgwọọrụha kwaafọ.
Ọbụrụnaịchịkọtaraọnụọgụgụnkendịna-esoụzọ，ọhụụga-enweịlọọrụndịnweremmasịkwadogịmaka mgbanwe makangwaahịagịnaọrụgị。 Nkwadondịana-abụkarịnaọrụmaọbụụlọahịaọbụlaịga-akwụụgwọna-adaberen’otúọtụtụndịna-ekiri sipịananjikọgị。 ịdịmkpaịmarana，ọbụrụnaịmeevidiyo akwadoro，ịga-emerịrịya gwa ya naakaụntụYouTubegị.
Otu n’imeọtụtụonyinye nkwado YouTubena-achọtaFameBit，ọbụahịamakandịokikeịchọtaohere nkwado ma nweta ego siten’ịkepụtana ikesaọdịnaya.
Ọbiterụnaịkwadoro akaragịma nwee ezigbondịna-eguzosi ike n’ihe，nikereịmaliteịzụngwáahịagị网站naịkọya na vidiyogị。 /mepụtaebenrụọrụweebụnkegịbụusorodịmfe madịmfe naụdịahịa/ọrụịnwere ikeịnyenwereikeịdịgasịiche，ọbụrụhaalanaọgbasarandịna-ege g。 Smosh，dkaọmụmaatụ，na-emesiọtụtụihe ike banyereịzụahịamaeleghịanya na-eme ka ego buru ibuụlọahịahan’ịntanetị.
Ie na-eme n’ogena-adịbeghịanya n’etitindịna-emepụtaọdịnayabụijiìgwèmmadụna-eme ihe na okpukpuabụọkasịukwuu na-ekpoọkụna-eme ugbu a Kickstarter na Patreon。 Ihedịichen’agbataabụọnaụonye nkembụnọnankwụnyeego na-akwadoọrụma nkeọzọbụụdịna-agagharịazụ。 Ntughari isibụzọkachasịmma isi mee kandịna-esoụzọgwkwụọgwọmakaụgwọegodịukwuu。 Iheatụole na ole nkeụgwọana-akwụụgwọbụnanịọdịnayankendịọrụakwụụgwọ，nkwekọrịtanke onwe onye，nangwáahịapụrụiche.
YouTube上的YouTube仅仅是YouTube上的YouTube节目，而YouTubers则是YouTube上的电视节目。 Ntughari ego nwere ikeịbụisi iyi ego maọbụrụna ejiri yarụọọrụnkeọma，maịkwesịrịịmaraebe ikpo okwu na-adabarandịna-egegịntị.
Ọbụrụnaụdịnịdayanayaịna-achọkaịmepụtabụotunkwụsị（ntụgharịihe nkiri maọbụalbum egwu），Kickstarterbụkarịebe kacha mmaịmalite.
Na Kickstarter，na-ebido otu oru ngo yana egoọchọrọiji mezueọrụgị。 Ndmmadad na-ekwe nkwa na ya maọbụrụnaịjisie ike iru ihe mgbaruọsọgịn’ime oge imecha，ịga-enweta egoahụ。 Mmemme Kickstarter na-ebuwanye ibu na iheụfọdụna-eme kaọtụtụnde dollar nweta ego.
Ụfọdụndịa ma amadịkaKungokéiwe jisiri ike inweta $ 600,000 nke ego site na nkwa ya.
ezbụezie na Kickstarter na-ebute nnukwu ego ana-akwụụgwọ，na-enye Patreon aka kaọdịkwuontakịrịmaọbụna-aga n’ihu.
Oyikarịrịka gaga-achọtaYouTubersna-akpọllPatreondịkaọink eye yego nkw Knye ego siri iketụnyereKickstarter。 Dịka Kickstarter，Na-edepụtapeeji nke nwe，mgbaruọsọna Patreon，iịdịichebụna ihe mgbaruọsọbụụkwụụgwọego kwaọnwakarịaotu。 YouTubers的YouTube频道Jim Jim Sterling的Red Media Media频道的价格$ 12,000的价格$ 19,000的价格$ 19,000的价格.
吉姆·斯特雷灵（Jim Streling）身价$ 12,000美元+ nelọnwamaka ya YouTube香奈儿（chanel）.
Ịghọonye ga ga-eme
Kaọdịugbu a，ga-enwerịrịechiche nke iheịna-emeọganihuỊTubernaotúha si aga ime ya。 YouTubetụtụn’ime nnukwu YouTubers malitereịmeọdịnayana isiokwu na ebe ha na-enwemmasịna ya ma nweeagụụịnọgidena-emeọdịnayaahụ.
Ịmaraiheịna-achọsiike mabụrụonyeọkachamaran’ọhịaahụga-enyeregịakaịmalite，man’ikpeazụ，ga ga-adabere na oge namgbalịdịukwuu naịnjikere itintoto aka.
rs fe ile YouTube YouTube rs rs YouTubers，ihe niileịga-emebịṅịṅchịna igwefoto。 Ma eziokwu nke okwuahụbụ，Tuberpụtaraịrụọrụkarịrịigwefotoịhazima nyochaaọdịnayagị，ọ.
Iji YouTubedịka NkumeNzọụkwụ
MakaakụkọganihuPewDiePie，e YouTubeụọọ—YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube Nkebụihe merendịna-emepụtaọdịnayaji kpebie na haagaghịadabere kpamkpam na YouTubedịkaihe nkesa ha.
Twitchbụiheatụkachasịelu nke ikpo okwu nke na-enyegịohereịbanyeọdịnayagịnandịna egentịmgbeịna-enwetandụmọdụna onyinye sitere nandịna-ekiri。 Iji YouTube gaa na mgbanwe n’imeọrụdịiche ichebụkwaihe a na-ewu ewu naọtụtụiheỊTubersna-eme n’ime fim，telivishọn，na mgbasa ozi.
Na 201，吉米·塔特罗（Jimmy Tatro）玉米酱 "The Jimmy Tatro频道," nke emesịrịgbanwere "NdJ根据吉米. "由Netflix Usoro主演的Tatro nwere ikeịhụ" 美国破坏者. ";亚娜·维迪奥 "22跳街" 呐 "nnukwu 2".
ỊbụgịTTuberbụihe gbasara obiụtọ
Ime nnukwu ego siten’ịbụonyeỊTubernwere ike iyiụda，maọbụ，man’ikpeazụ，ihe na-eme kaọtụtụndịỊTubersnọgidena-emeọdịnayaabụghịego。 ke bkeọṅụnime ime kandịọzọnweeafọojuju.
YouTuber prtara nabọghịmgbe niile kaịna-achọile vidio na elekere anya otu nde naịnwetaọnụọgụnọmbannukwu aha。 ỊbụgịTTuberbụbanyereịnyefeagụụgịna ihe okike ma mee kaọbụrụihendịmmadụna-enwe.
,，ị？ Malite na-eme vidiyondịahụ!
Kedu ka ị na-esi enweta site site na ịda gị? Ezigbo mma? Ọfọn, gịnị
Kedu ka ị na-esi enweta ego site na ịda gị? Եզիգբո մամա? Ọfọn, gịnị
Kedu ka ị na-esi enweta ego site na ụda gị؟ Ezigbo mma? ،fọn، gịnị
Kedu ka ị na-esi enweta его сайт на ụda gị? Ezigbo mma? Ọfọn, gịnị